လုံးဝ Sexy Pop Fanatic Vinyl Lip !!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » လုံးဝ Sexy Pop Fanatic Vinyl Lip !!!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ ပျိုမေတို့ လုံးဝအကြိုက်တွေ့စေမယ့် အလန်းစား Pop Fanatic Vinyl Lip လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အထာကျကျနဲ့ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးလိုချင်ရင်တော့ ဒါလေးကို လုံးဝဆောင်ထားသင့်ပါတယ်နော်။
ရေဆေးဗူးပုံစံထုတ်လုပ်ထားပြီး ဆိုးတဲ့ အတံလေးကလည်း အလွန်နူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့ကို ခံစားရစေမှာပါ။ အရောင်အားဖြင့်လည်း Zap, Kapow, Pop, Boom, Wow နဲ့ Shazam ဆိုပြီး ၅ရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီ Lip Gloss လေးဟာ အရမ်းစိုရွှမ်းလှပြီး Mirror-like Shine မျိုးဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ Date လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ လုံးဝအာရုံစိုက်ခံရမှာ အသေအချာပါပဲ။
အရောင်ထွက်အားကလည်း ပုံပြအတိုင်း အတိအကျ ထွက်တဲ့အပြင် အနံ့လေးကလည်း သင်းတာကြောင့် အသုံးပြုတဲ့အခါ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် နှုတ်ခမ်းသား အစိုဓာတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးပြီး နူးညံ့စေပါတယ်။
သတိထားရမယ့် အချက်ကတော့ Lip Gloss အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် အများကြီး တခါတည်း မဆိုးပဲ နည်းနည်းချင်းဖြည့်ပေးသင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ပွပြီး အလှပျက်ကုန်မှာပါ။ Gloss အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် တာရှည်တော့မခံပါဘူး။ Music Festival တွေ သွားရင်တော့ ကွက်တိပါပဲနော်။ သေချာတာတခုကတော့ ဒီ Lip Gloss လေးဆိုးထားရင် လုံးဝလည်ပြန်ငေးခံရမှာပါ။
လုံးဝထင်ပေါ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းသားအလှကို ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Vinyl Lip ကို ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 10$ နဲ့ရောင်းချပေးလျက်ရှိပြီး ဝယ်ယူလိုပါက USA Direct Online Shop ကတဆင့်မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်နော်။
Tags: Lip Glosslipsticks